काठमाडौं, १० बैशाख । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी तालमेल तथा एकीकरणको सूत्राधार उत्तरको छिमेकी मुलुक चीन रहेको अनुमान धेरैको थियो । हुन पनि चिनियाँ बुद्धिजीवीहरुको उपस्थितिमा विदेशमन्त्रीले औपचारिक रुपमै एमाले–माओवादीलाई एकीकरण गर्न सुझाव दिएपछि यो कुरा पुष्टि नै भयो ।
भारतीय नेताहरुको अभिव्यक्ति यस ढंगले आएको भए राजनीतिमा हस्तक्षेप भएको प्रचार गरिन्थ्यो तर नेपाली कांग्रेसले यसो गर्नुलाई सायद तुक्ष्छता सम्झियो र कुनै प्रतिक्रिया जनाएन ।
एमाले–माओवादीको एकीकरणमा चीनभनदा एक कदम अघि बढेर दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारत सक्रिय भएको रहस्य विस्तारै खुल्न थालेको छ ।
यी दुई पार्टीबीचको एकीकरणका लागि नेपाल मामिलाका भारतीय रणनीतिकारहरु गम्भीर ढंगले जुटेको भारीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सुरक्षा सल्लाहकार टिममा रहेका एक सदस्यले रहस्य खोलेका छन् ।
मेघालय, आसामको सुरक्षा रणनीति हेर्ने जिम्मा पाएका उनी प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीसँग लामो समयदेखि निकट छन् । अरुण तेस्रो खारेजी तथा महाकाली सन्धि ताकादेखि उनीहरुको सम्बन्ध प्रगाढ बनेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणलगत्तै एकीकरणको गम्भीर प्रयासमा भारतीय रणनीतिकारहरु जुटेका हुन्, समाचार स्रोतले बतायो । यसको कारण खोल्दै उनले भने, एकीकरण भएन भने भारतका कारण भएन भनेर प्रचार गरिन्छ ।
भारतीय प्रधानमँत्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण आगामी बैशाको अन्तिम सातामका लागि करिब करिब तय भएको छ । मोदीको नेपाल भ्रमणअगावै एमाले–माओवादीको एकीकरण गराउने प्रयास गम्भीर रुपमा अघि बढिरहेको छ ।
पार्टी एकीकरण गरी बलियो प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमणमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छा थियो । तर, भारतकै कारण ओलीको त्यो इच्छा पूरा हुन सकेन भन्ने भ्रम ओलीमा अझै छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल मामिलासमबन्धी रणनीतिकारहरुलाई यस विषयमा गम्भीर ढंगले कुरा उठाएका थिए ।
तपाईहरु नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँग सम्बन्ध सुधार होस् भन्ने चाहनु हुन्छ, तर पार्टी एकीकरण नगर्न प्रचण्डलाई दबाब पनि दिनु हुन्छ, यो दोहोरो चरित्र किन ?
प्रत्युत्तरमा भारतीय रणनीतिकारहरुले भनेका थिए–तपाईको भ्रमणअघि नै पार्टी एकीकरण गराउँदा भारतले गराइदिएको सन्देश जान्छ, जुन सन्देश प्रत्युत्पादक हुन सक्छ, तपाईहरुका लागि भारत एकीकरणको पक्षमा छैन भन्ने सन्देश जाँदा नै राम्रो हुन्छ ।
भारतीय रणनीतिकारहरुको यो उत्तरपछि ओलीले प्रशन्नता व्यक्त गरेका थिए । समाचार स्रोतका अनुसार अब प्रधानमन्त्री मोदीले छिट्टै नेपालको भ्रमण गर्ने र त्यसअघि नै पार्टी एकीकरण भइसक्ने कुरा ओलीलाई भारतीय राण्नीतिकारहरुले भनेका थिए ।
उनीहरुको भनाई थियो–तपाईले अहिलेभन्दा पनि बलियो प्रधानमन्त्रीको रुपमा हाम्रा प्रधानमन्त्री मोदीको स्वागत गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो सदीक्षा छ । यता, पार्टी एकीकरण गर्ने, तर यो एकीकरणमा भारतीय संलग्नता छ भन्ने गन्धसमेत नदिने गरी एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घनीभूत छलफल अघि बढाएका छन् ।
विगत दुई दिनदेखि यी दुई अध्यक्षहरुको अधिकांश समय यही घनीभूत छलफलमा बितिरहेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भारतीय दूतावासबाट सिधै टेलिफोन आएपछि डेढ महिनाअघि अवरुद्ध भएको पार्टी एकीकरण प्रक्रिया पुनः सूचनारु गर्ने सहमति प्रधानमन्त्री ओली भारत भम्रणमा जानुभन्दा केही दिनअघि भएको थियो ।
त्यतिबेला बैशाख ९ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको ऐतिहासिक दिन पारेर विशाल आमसभा आयोजना गरी पार्टी एकीकरणको घोषणा गर्ने सहमति भएको थियो । आमसभाका लागि मञ्च व्यवस्थापन तथा राजधानी बाहिरबाट मान्छे आसोर्नका लागि बसको प्रबन्धसमेत गरिएको समाचार प्रवाह गरिएको थियो ।
यी दुई पार्टीबीच एकीकरण हुने नै भयो भन्ने टुंगोमा सर्वसाधारणसमेत पुगेका थिए । तर एकाएक माओवादीले कडा सर्त अघि सारेका कारण बैशाख ९ गते एकीकरण नहुने समाचार प्रवाह भयो ।
प्रचण्डले जनयुद्धलाई सम्मान गर्नुपर्ने, एकीकृत पार्टीको कार्यकारी अध्यिक्ष आफैं हुनुपर्ने, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बराबरी प्रतिनिधित्वका आधारमा कमिटीहरु निर्माण गर्नुपर्ने, चुनाव चिन्ह सूर्यभित्र हँसिया हथौडा नै हुनुपर्ने सर्त अघि सारे ।
यो सर्तलाई एमालेले स्वीकार गरेन । एमालेले पार्टीको हैसियतअनुसारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अडानलाई दोहोर्यायो । यो भनेको पार्टी एकीकरणका लागि निकै ठूलो गाँठो थियो ।
परराष्ट्रमन्त्रीको एजेन्डा, चिनियाँ मन्त्रीको बोली नै बन्द
चिनियाँ सहयोगमा निर्मित १.३ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जाका कारण यतिबेला सिंहदरबार झलमल्ल भएको छ । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार लोडसेडिङमुक्त हुनु राज्यका लागि उपलब्धिकै विषय हो । अब सिंहदरबारका २१ वटा भवनमा एक मिनेट पनि बत्ती जाँदैन भन्ने विश्वास छ ।
५० करोड रूपैयाँ लागतमा निर्मित उक्त सौर्य ऊर्जाको गत चैत २७ गते प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरे । सोही समारोहमा चिनियाँ राजदूत होङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सौर्य ऊर्जा हस्तान्तरण गरिन् ।
उक्त सौर्य ऊर्जा नेपालकै हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो हो । तर मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा जम्मा ५० करोड रुपैयाँ लागतको परियोजना पनि आफ्नै स्रोत र साधनद्वारा नबनाई अर्को देशलाई गुहार्न‘लाई धेरैले विडम्बनाका रूपमा लिएका छन् ।
भोजपुरमा विद्यालय भवन निर्माणका लागि वैदेशिक सहयोग लिइनु र सिंहदरबारमा सौयै ऊर्जा जडानका लागि वैदेशिक सहयोग लिइनुलाई मुलुकको नीति निर्माण तहमा रहनेहरूले एउटै टोकरीमा राख्नुलाई पनि धेरैले विडम्बनापूर्ण मानेका छन् ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राजदूत योङलाई संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्न लगाइयो । राजदूतको प्रोटोकलकै कुनै सहसचिवलाई संयुक्त रूपमा उद्घाटन तथा हस्तन्तरण गर्न लगाइने पूर्वानुमान सिंहदरबारका कर्मचारीले गरेका थिए ।
राजदूतकै समकक्षी बनेर प्रधानमन्त्री ओली पुग्लान् भन्ने अनुमान कसैले गरेका थिएनन् । तर ओलीले प्रोटोकलको ख्याल गरेनन्, न त चिनियाँ राजदूतले नै यो ख्याल गरिन् । भारतीय सहयोगमा निर्मित साना परियोजनाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री र भारतीय राजदूतले संयुक्त रूपमा गर्ने परम्परा छैन ।
यसैबीच, छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण सम्पन्न गरी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली ज्यादै निराशाजनक अनुहार लिएर शनिबार दिउँसो स्वदेश फर्केका छन् । चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली ब्युरोक्रेट झैं फाइल हातमा लिएर व्याख्या गर्न थालेपछि उनी आश्चर्यमा परेका थिए ।
सामान्य शिष्टता पनि नराखी प्रस्तुत भएका ज्ञवालीको अवस्था बुझेपछि उनी उपरखुट्टीमा बसेको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । तर यता ज्ञवालीको चीन भ्रमण अत्यन्त सफल रहेको प्रचार गरिए पनि उनले त्रिभुवन विमानस्थलमा संवाददाताहरूसँग गरेको प्रस्तुति त्यस्तो देखिएन ।
जाने र आउनेबाहेक केही उपलब्धि नभएको उनको प्रस्तुतीकरण र बडी ल्यांग्वेजले देखाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रस्ताव राखेको, तातोपानी नाका छिटो सुचारु गर्न प्रस्ताव राखेको उल्लेख गरे ।
तपाइैले राख्नुभएका प्रस्तावका बारेमा चीनको प्रतिक्रिया के रह्यो ? भन्ने प्रश्नको भने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले उत्तर दिन सकेनन् । चीनले प्रतिक्रिया दिएको भए पो परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले उत्तर दिन सक्थे ।
ज्ञवालीले जुन प्रस्ताव राखेको बताएका छन्, यसअघिका सबै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले चीन भ्रमणका क्रममा यस्तै प्रस्ताव राख्ने गरेका छन्, तर चीनबाट ठोस प्रतिक्रिया आउन सकिरहेको छैन ।
२०५० सालमा भएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चीन भ्रमणबाहेक त्यसयताका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सफल हुन सकेको छैन । त्यतिबेला कोइरालाले नेपाल र चीनबीचका ११ वटा नाकालाई सडक यातायातले जोड्ने सम्झौता गरेका थिए ।
ढिलै भए पनि त्यो सम्झौता कार्यान्वयन भइरहेको छ । चीनका तर्फबाट यी ११ वटै नाकामा दुई लेनको पिच सडक बनिसकेको छ भने नेपालका तर्फबाट पनि किमाथांका, रसुवागढी, कोरलालगायतका ११ वटा नाकामा पिच सडक जोड्ने काम धमाधम भइसकेको छ, तरुणमा उल्लेख छ ।
पिच सडक यातायातले चीनका नाका नजोडिएसम्म दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला भएको व्यापार तथा पारवहान सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने अवस्था छैन । पिच सडकले जोडिएको एक मात्रै नाका तातोपानी विनाशकारी भूकम्पपछि चीनकै कारण बन्द छ ।